အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသူများကို ပြောပေးဖို့……. – Sharing
အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသူများကို ပြောပေးဖို့…….
Dr Mrs Mg | January 14, 2020 | ကျန်းမာရေး | No Comments
လေဖြတ်လို့ အကြောဆွဲနေသူ လမ်းမလျှောက်နိုင် ဖြစ်နေသူများကို ပြောပေးဖို့
အရသာကတော့ တော်တော် ခါးပါတယ်။ လိပ်စာ အတိကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မုံရွာနယ်က ကျေးရွာတစ်ရွာက တောကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဆေးနည်လေးပါ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ မုံရွာ-မန္တလေး ကားမောင်းသမား တစ်ယောက်ဟာ နိစ္စဓူဝ ကားမောင်းရတဲ့ အဖြစ်ကနေ ကိုယ်တစ်ခြမ်း သေပြီး လေဖြတ်တယ်ဆိုပါတော့။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ပေါင်းများစွာ ဆေးကုပေါ့။ သို့သော်လည်း အကောင်းတိုင်း ပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဆငျတုံးမနှယျအစို လကျတဆဈဖွတျ ငါးကပျြသား၊
ရခေကျြအေး ငှကျပြောဖူးပုလငျး နှဈပုလငျး (မန်တလေးဘီယာပုလငျး ပုံစံမြိုးကို ငှကျပြောဖူး ပုလငျးဟုချေါသညျ)၊
ရှောကျနုသီးနှဈလုံး (ရှောကျဘီလူးသီး) ဟုလညျး ချေါကွသညျ။ (ရှမျးပွညျနယျမှာ ပေါပါတယျ)
ပြိုမတေို့အတှကျ တဈလအတှငျး ၂၅ ပေါငျ ကနြညျး (ကိုယျတှေ့)
ရင်သားကင်ဆာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ ကုက္ကိုရွက်